बिहे गरेको १२ घण्टा नबित्दै दिदीबहिनीले लिए संसारबाट बि दा.. – Gazabkonews
विवाह एउटा पुरूष र स्त्रीकाबीच सम्बन्ध कायम गराउने गठबन्धन हो । सामाजिक रीत-चलन र पद्धति हो, संस्कार र बन्धन हो । विवाह परिणय हो र परिणय विवाह हो । विवाह सामाजिक, धार्मिक तथा कानूनी हुने गर्दछ । मानिस स्वभावैले सामाजिक प्राणी हो । समाजविनाको मानवको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सृष्टिका यावत् जीव मात्र खोजमेल गरेर जीवन चलाउँछन् तर मान्छे खनेर, खोस्रेर, रोपेर खाने प्राणी हो । मान्छे आफूलाई आवश्यक परेको वस्तुको निर्माण गर्ने हैसियत राख्दछ । त्यसैले पनि मान्छेलाई अरु जीवको तुलनामा चेतनशील मान्नै पर्दछ । खानु मात्र पनि मान्छेको जीवन होइन भन्ने कुरा उसको अन्तस:मा घुसेको पनि छ ।
समाजमा व्यक्ति व्यक्तिले आफूखुसी मन लागेको गर्दै हिँड्दा भ द्रगोल र अव्यवस्थाको हालत हुँदै जाँदा मान्छेले नियम,विधि,कानून,संस्कार,धर्म आदिको निर्माण गरेको देखिन्छ । जसले जोसँग पनि आफू खुसी शा’ री रि’क स’म्ब न्ध बनाउँदै जाँदा समुदायमा अन्योलको वातावरण बनेकोले मान्छेले मान्छेसँगको शारीरिक सम्बन्ध बनाउने कुरालाई विवाह प्रणाली वा पद्धतिमा ढालेको देखिन्छ ।यो पद्धति समय, परिवेश, परिस्थिति, स्थान अनुसार आआफ्नै खालको बन्दै गएको पाइन्छ । विवाहको चलनमा देशको नारी पुरूषको सङ्ख्याको पनि ठूलै भूमिका रहेको देखिन्छ ।
प्रेम कुनै विषय वा व्यक्ति उपर मनमा पैदा हुने आकर्षण, अपनत्वको भाव, कोमल आत्मिक भावना, स्नेह, ममता, ममत्व, प्रियता, प्रीति, अनुराग, प्यार, माया, दया, कृपा, हर्ष, खुसी, लोभ वा हार्दिक मेल हो भने अनुग्रह र क्षमासँग पनि प्रेम जोडिएको छ र प्रेम भक्तिसँग पनि जोडिन पुग्दछ । त वास्तवमा प्रेम के हो ? किन हुन्छ प्रेम ? प्रश्न सजिलै आउँछन् तर व्यवहारमा उत्तर त्यति सजिलो छैन जसरी शब्दकोशले परिभाषित गर्दछ । प्रेमको बारे र फैलावटमा मान्छे जति डुब्दै र सोच्दै जान्छ त्यति कठिनाइ आउँदै पनि जान्छ ।
जसरी मानसिक प्रेम नभई शारीरिक प्रेम हुन सक्दैन, त्यसै गरी शारीरिक प्रेमले अन्तमा मानसिक प्रेम नजगाई रहन सक्दैन अर्थात् आत्मिक वा शा रीरिक दुवै खाले प्रेममा मनको भूमिका नै सर्वोपरि हुन्छ । मन नै त्यस्तो एउटा तरङ्ग हो जसले प्रेम जगाउँदछ र मान्छे वा प्राणीलाई हरेक कुरामा सक्रिय राख्दछ । यदि आत्मिक वा शारीरिक प्रेमविना कुनै काम गरिन्छ भने त्यो प्रेम नभई अरु केही लोभ, लालच वा स्वार्थ आदि मात्र हो ।
मैले मानवको चेतनाको धरातलको विकासको मूल कारण स’ म्भो ग र हातको बुढी औँला नै हो भनेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ? अनुहारको भावले देखाउने सुख, आनन्द, पीडा र दु:खको प्रत्यक्ष प्रमाण हो सामुन्नेको स’ म्भो ग । स’ म्भो गकालमा विपरीतले अनुहार हेर्ने मानवबाहेक कुन प्राणी छ ? पर्नुभयो के अलमलमा ? सोच्नुस् सोच्दैमा के बिग्रन्छ र ?
यी समाजका केहि घटना हुन् यसै क्रममा सुर्खेतमा घटेको एउटा घटनाले सबैलाई अचम्मित पारेको छ । सुर्खेतमा जंगलमा घाँस का’ट्न गएका दिदीबहिनी झु ‘न्डि’एको अवस्थामा मृत फेला परेका छन् । पञ्चपुरी नगरपालिका–६ बाबियाचौरमा बस्दै आएका दुईजना दिदीबहिनी यस्तो अवस्थामा मृत भेटिएका हुन् ।
१४ र १५ वर्षीया किशोरी दिदीबहिनी यस्तो अवस्थामा शुक्रबार मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी तथा डिएसपी रामप्रसादले बताए । उनकाका अनुसार उनीहरू शुक्रबार बिहान ८ बजे घरबाट घाँस का ’ ट्न नजिकैको जंगलमा गएका थिए । सोही ठाउँमा ११ बजे यस्तो अवस्थामा स्थानीयले देखेका थिए ।